Akkaataa gafata uumte ykn mul'annoo Design keessaa ykn fuula caancala SQL irratti hundaa'uun, sajoowwan armaan gadiitu mul'atu:
Galfata SQL kaa'a akkasumas firii galfata mul'isa. Dalagni Galfata Ka'aa galfata ol hin kaa'u.
Galfata qulqulleessuu fi gabateewwan mara fooddaa wixineetirraa haqa.
Mul'ina jijjiiraa wixinee bani/ cufi
Mul'annoo wixinee ykn galfata mul'annoo SQL mul'isa.
Mu'annoo Wixinee Jijjiiraa Banaa / Cufaa
Gabateewwan gara wixinee fooddatti saagaman ifteessa. Qaaqa Gabatee Dabalaa keessaa, gabatee barbaadde hojii ammeef fili.
"Dalagaa" tarree wixinee mul'annoo gadaanaa fooddaaGalfata Wixinee.
Tarree "Gabatee" kutaa gadaanaa Galfata Wixineemul'isa.
Tarree "Maqbiroo" kutaa gadaanaa Galfata Wixineemul'isa.
Fuula caancala SQL irra sajoo armaan gadiitu jira:
Title is: Kabala Saxaxa Gaafataa